Deg Deg:Caare oo ku gacan sayray dalab uga yimid Maamulka Puntland – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Caare oo ku gacan sayray dalab uga yimid Maamulka Puntland
Hogaamiyaha Jabhada dib u xoreynta Somaliland, Kornayl Siciid Caare ayaa waxa la sheegaya in uu ku gacan sayray dalab uga imaaday Maamulka Puntland.
Korneyl Caare ayaa gebi ahaanba iska diiday in uu ku dhaqaaqo talaabooyin lidi ku ah gooni isku taaga Somaliland, sida uu sheegay Cismaan Cumar Dool.
Siyaasi Dool oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri “Kornayl Caare iyo Puntland waxay isku mari waayeen qaabka maamulkaasi u taageerayo jabhada Kornaylka iyo wajiga uu dagaalkiisu noqonayo, Caare isaga oo Qardho jooga ayuu odhan jiray Somaliland, waana geesi halyey qaran ah waana nin rag garta waayey”.
“Kornayl Caare waxay isku maandhaafeen maamulka Puntland iyo dawlada Soomaaliya in lagu yiri magaca Soomaaliya qaado oo aanu kugu caawino, isna waxa uu ku yiri ma doonayo magaca Soomaaliya ee Somaliland is haysata ayaanu nahay ee sidaas miyaad igu garab galaysaan iyaguna waxay ku yiraaheen maya oo Somaliland ma aqoonsanin namana khusayso”.
Wuxuuna intaas kusii daray “Caare sidaas ayuu ku waayey in baabuur tigniko ah la siiyo in lacag la siiyo iyo in askar la siiyo, waxaanu noqday qof mabda leh oo is yiri dadkaaga iyo umada Somaliland ha khiyaamaynin, sidaas ayaanu kaga soo baxay maamulka Puntland kuna soo galay Somaliland iyada oo aanay waxba ku soo kordhin ciidankii uu la tagay”.
“Halka uu maanta ku jiro Korneyl Caare, ninka yiraahda halagu laayo oo weerar ha lagu xaliyo waa nin ka shaqaynaya in dabku sii fido, Caare waa in si macquul ah loola hadlaa oo la dhagaystaa waxa uu tabanayo”.
Previous Post: Wafdi ka socda Wasaaradda Difaaca Qatar oo Dhuusamareeb gaaray
Next Post: Daawo:-Maanso Baroor-diiq ah Geeridii Naxdinta Lahayd Ee Marxuumad Wariye Hodan Naaleye.